Okwu Barack Obama gwara ndị Afrịka - Afrikhepri Fondation
Barack Obama na ndi Afrika
Okwu Barack Obama na ndi Afrika
JEguzoro m n’ihu gị dị ka onye America dị mpako. Eguzo m n’iru gị dịka nwa onye Africa. Africa na ndị ya nyere aka ịkpụzi America ma kwe ka ọ bụrụ nnukwu mba ọ bụ. Afrika na ndi mmadu enyerela aka imata onye m bu na otu m si ahu uwa. N'ime obodo ndị dị na Kenya ebe a mụrụ nna m, amụtara m site n'aka ndị nna nna m, na ndụ nna nna m, nrọ nna m, njikọ ezinụlọ nke jikọtara anyị niile ndị Africa na ndị America.
Dịka ndị nne na nna, mụ na Michelle chọrọ ịgba mbọ hụ na ụmụ anyị nwanyị abụọ mara ihe nketa ha - European na Africa, n'ike ya niile na mgba ya niile. Ya mere, anyi kuru umu anyi ndi nwanyi wee soro ha gaa n’ikpere mmiri nke odida anyanwu Africa, na Gates of No Return, mara na ndi nna nna ha bu ndi ohu na ndi nwe ha. Anyị soro ha gbaa akwụkwọ n'otu obere ọnụ ụlọ dị na Robben Island ebe Madiba gosipụtara ụwa na n'agbanyeghị ụdị nkewapụ onwe ya nke anụ ahụ, naanị ya bụ onye nwe ọdịnihu ya. Maka anyị, maka ụmụ anyị, Africa na ndị bi na ya na-akụziri anyị nkuzi dị ike - na anyị ga-ebuli ugwu ebumpụta ụwa nke mmadụ ọ bụla.
Ebube - echiche ahu di nkpa na site na ndi mmadu, n'agbanyeghi ebe anyi si bia, ihe anyi di ka ha, anyi nile bu ndi nha, amara nke Chineke metutara anyi. Onye ọ bụla bara uru. Onye ọ bụla gụrụ. Onye ọ bụla kwesịrị ka e jiri nkwanye ugwu na nsọpụrụ mesoo ya. Kemgbe ọtụtụ akụkọ ihe mere eme, mmadụ ahụbeghị nke a. A na-ahụ ugwu dị ka omume ọma echebere maka ndị nọ n'ọkwá na ihe ùgwù, ndị eze na ndị okenye. O were mgbanwe mgbanwe nke uche, n’ime ọtụtụ narị afọ, iji meghee anya anyị n’otu ugwu nke onye ọbụla. N’uwa nile kwa, ọgbọ nile agbaala mbọ itinye echiche a n’usoro iwu na ụlọ ọrụ.
N'otu aka ahụ, ebe a n'Africa. Nke a bụ ebumnuche nke ụmụ mmadụ, alaeze Africa oge ochie bụkwa ebe obibi nke nnukwu ọba akwụkwọ na mahadum. Mana ajọ ihe ịgba ohu agbanyela mkpọrọgwụ ọ bụghị naanị na mba ofesi, mana ebe a na ala mba. Ndị ọchịchị gbara ọchịchị mba Afrịka gharịị ma mee ka ndị mmadụ gharazie akara aka ha. N’ikpeazụ, òtù nnwere onwe ahụ mụbara. Na afọ 50 gara aga, na nnukwu mkpebi nke mkpebi onwe onye, ​​ndị Africa nwere a rejoụrị na ọkọlọtọ ndị mba ọzọ gbadatara na ọkọlọtọ mba gị wee bilie.
Dị ka South Africa Albert Luthuli kwuru n'oge ahụ, ihe ndabere maka udo na òtù ụmụnna n'Africa ka a na-eweghachi site na mbilite n'ọnwụ nke ọbụbụeze mba na nnwere onwe, nke nha anya na ùgwù nke Nwoke. Ọkara narị afọ na oge nnwere onwe a, ọ bụ oge iji wepụ echiche ochie nke Africa ka na-ada ogbenye na esemokwu. Mustwa ga enwerịrị ọganihu pụrụ iche nke Africa.
Taa Africa bụ otu mpaghara kachasị ike n'ụwa. A na-atụ anya na ndị etiti Africa ga-eto ihe karịrị otu ijeri ndị na-azụ ha. Site na ọtụtụ narị nde ekwentị mkpanaaka, na-arịwanye elu maka ịntanetị, ndị Africa amalitelele site na teknụzụ ochie na ọganihu ọhụrụ. Afrika na-agagharị, Africa ọhụrụ na-apụta. Site n'ọganihu a, yana na mmekorita ya na ụwa, Afrịka enwetawo ọmarịcha uru na ahụike. Ọnụ ọgụgụ nke nje HIV ọhụrụ agbadatala. O yikarịrị ka ndị nne Africa hà na-adị ndụ mgbe ha na-amụ nwa ma nwee ụmụ ọhụrụ dị mma. E belalata ọrịa ịba, na-azọpụta ndụ ọtụtụ nde ụmụaka Africa. Emewo ka ọtụtụ nde mmadụ daa ogbenye. Afrịka emeela mba ụwa zigara ụmụaka ọzọ ụlọ akwụkwọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọtụtụ ndị Africa, ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị na ụmụaka na-ebi ndụ nwere ugwu na olileanya.
A pụkwara ịhụ ọganihu Africa na ụlọ ọrụ ndị na-akpọkọta anyị ọnụ taa. Mgbe mbụ m batara na ndịda Sahara Africa dịka onye isi ala, a na m ekwu na Africa achọghị ndị nwoke siri ike, mana ụlọ ọrụ siri ike. Otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ nwere ike ịbụ African Union. N'ebe a, ị nwere ike ịbịakọta ọnụ, yana okekọrịta itinye aka na ugwu na mmepe mmadụ. N'ebe a, mba 54 gị na-agbaso otu echiche nke Africa, nke nwere udo na udo. Ka Africa na-agbanwe, Akpọrọ m ụwa ka ọ gbanwee ụzọ o si ele Afrịka anya.
Otutu ndi Africa agwala m, anyi achoghi enyemaka, anyi choro ahia nke na eme ka oganihu. Anyị achọghị ndị ahịa, anyị chọrọ ndị mmekọ ga-enyere anyị aka iwulite ikike nke anyị itolite. Anyi achoghi ihu ojoo riri ahu, anyi choro ime ihe nke aka anyi ma choputa odinihu anyi. Dị ka Onye isi ala, a na m arụ ọrụ ịgbanwe mmekọrịta nke America na Africa - nke mere na anyị na-ege ndị enyi anyị n'Africa ntị n'ezie ma na-arụkọ ọrụ ọnụ, dịka ndị mmekọ ibe. Enwere m afọ ojuju maka ọganihu anyị nwere. Anyị abawanyela mbupụ US na mpaghara a, ịbụ akụkụ nke azụmaahịa na-akwado ọrụ maka ndị Africa na ndị America. Iji kwadoo ike anyị - yana nkwado bipartisan site na ụfọdụ ndị otu ama ama nọ na Congress nọ ebe a taa - 20 n'ime ha nọ ebe a taa - m binyere aka na ntinye afọ 10 nke Africa Uto na Ohere Iwu.
Achọrọ m ikele ha niile. Ihe kpatara na ha anaghị emegide obere oge ka ị wee hụ ha, n'ihi na ha rụrụ ọrụ dị ịtụnanya. Anyị amalitela atụmatụ dị mkpa iji kwalite nchekwa nri na ahụike ọha na eze na ịnweta ọkụ eletrik, na ịkwadebe ọgbọ ndị ọzọ nke ndị isi Africa na ndị ọchụnta ego ga-enyere aka mee ka ịrị elu nke Africa ruo ọtụtụ iri afọ na-abịa. N'afọ gara aga, dịka onye isi ala kwuru, anabatara m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị isi ala 50 na ndị isi ala Africa na Washington ka anyị wee nwee ike ịmalite isi ọhụụ nke imekọ ihe ọnụ. Na abia na African Union taa, achọrọ m iwulite na nkwa ahụ. Ekwenyere m na ịrị elu nke Africa abụghị naanị ihe dị mkpa maka Africa, ọ dịkwa mkpa maka ụwa niile. Anyị agaghị enwe ike imeri ihe ịma aka nke oge anyị - site na ịchekwa akụ na ụba zuru ụwa ọnụ na-agbada ókè na-eme ihe ike, na-egbochi mgbanwe ihu igwe, na-akwụsị agụụ na oke ịda ogbenye - na-enweghị olu na onyinye nke otu ijeri ndị Africa.
Ugbu a, ọbụlagodi na nnukwu ọganihu Africa, anyị ga-amata na ọtụtụ n'ime uru ndị a na-adịgide na ntọala siri ike. Tinyere akụ na ụba ọhụrụ ahụ, ọtụtụ narị nde ndị Africa ka na-enwe ajọ ịda ogbenye. Tinyere ebe a na-emepụta ihe ọhụrụ na nkà na ụzụ, ọtụtụ ndị Africa jupụtara na ụlọ ndị na-enweghị ọkụ eletrik ma ọ bụ mmiri pọmpụ - ọkwa ịda ogbenye nke na-awakpo ùgwù mmadụ. Ozokwa, dịka ọdụdụ ọdụdụ na ọdụ ọsọsọ kacha eto eto, ọnụọgụ ndị Afrịka n'ime iri afọ ndị na-abịanụ ga-amụba okpukpu abụọ ruo ihe ruru ijeri mmadụ abụọ, ọtụtụ n'ime ha ga-abụkwa ndị na-eto eto, n'okpuru 18 ugbu a. , n'otu aka, nke a nwere ike iweta oke ohere ndị a na-eto eto n'Africa iji nweta teknụzụ ọhụụ ma gbanye uto na mgbanwe ọhụrụ. Ndị na-akụnụba ga-agwa gị na mba, mpaghara, kọntinent na-eto ngwa ngwa na ọnụ ọgụgụ ndị na-eto eto. Onu ogugu di na onu ogugu mmadu - ma oburu na azuru ndi ndia. Otu onye kwesiri ile anya na Middle East na North Africa iji hụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ntorobịa na-enweghị ọrụ na olu dara ụda nwere ike ịkpalite ọgba aghara na ọgba aghara. M na-agwa gị na ọrụ kachasị mkpa chere Africa ihu ugbu a na ọtụtụ iri afọ na-abịa bụ ịmepụta ohere maka ọgbọ ọzọ. Ma ọ ga-abụ nnukwu ọrụ. Africa kwesiri ikwuputa otutu nde ndi oru karie ugbua. Na oge bu nke kachasi mkpa. Nhọrọ ndị emere taa ga-ekpebi usoro Africa, ya mere ụwa, ọtụtụ iri afọ na-abịa. Ma dị ka onye gị na ibe gị, ka m tụnye aro ọtụtụ ụzọ anyị nwere ike isi merie ịma aka a ọnụ.
Barack Obama na African Union (2015)
Audacity of Hope: Echiche banyere claghaghachi Echiche America
1 ọhụrụ site na .22,95 XNUMX
Zụta € 22,95
Emelitere ikpeazụ na November 23, 2020 6:17 am
Paul Bogle, ohu ahụ ghọrọ onye dike ama ama ama na Jamaica
Mkpụrụ ndị a na-emerụ ahụ ike nke ndị Africa
Lelee Bood diamond (2006)